Qomo QD3900H2 Desktop Gwaro Kamera
Qomo QD3900H2 gwaro kamera ine 10x zoom kugona uye inyanzvi yemifananidzo sensor kuendesa mavara akajeka pane yakakwirira-tsanangudzo, Yakazara HD 1080p inobuda sarudzo ine makumi matatu mafuremu pasekondi.Inotsigira HDMI kupinza/kubuda, iyo QD3900H2 inoenderana nezvakawanda zvetsanangudzo yepamusoro yekuteerera / vhidhiyo michina.Ipapo ndangariro yemukati inochengeta kusvika ku512MB mifananidzo uye inowedzerwa ne USB flash drive/SD kadhi.One-touch audio / vhidhiyo kurekodha mharidzo pasina kudiwa kwePC.Yakavakwa-mukati backlight dhizaini inozadzisa iyo yakawanda-image kuratidza zvinodiwa.Iyo miviri miviri inogadziriswa mwenje yedivi dhizaini inodzivirira kuratidzwa.Imwe-bhatani otomatiki-tune inopa yakakwana mhando yemufananidzo nguva dzese.Iyo yakasarudzika purojekita modhi yekubatanidza LCD kana DLP mapurojekita kudzikisa kukanganiswa kunokonzerwa nemhando dzakasiyana dzeprojekita tekinoroji inopa yakanakisa mhando yemufananidzo.
Iyo QOMO QD3900H2 desktop gwaro kamera inotsigira yakazara 1080p resolution pamakumi matatu fps.Iyo 10x zoom inobvumira vashandisi kuti vatarise mukati mezvakanyanya kukosha maficha emharidzo yavo.Iyo QD3900H2 inoratidzira Qomo yakakwira mhando yekufungidzira sensor inoratidza kuderedza ruzha uye HD yakajeka kugadzirwa kwemavara.
Iyi midhiya yepakati gwaro kamera zvakare ine A4 backlit nhanho, inokodzera zvakakwana bhuku rezvinyorwa kana bepa gwaro, 512MB yemukati yekuchengetera mifananidzo uye inosanganisira Image/Vhidhiyo Capture software.Iwe unogona zvakare kuwedzera ndangariro nekushandisa USB chigunwe drive kana SD kadhi.
Iyo QD3900H2 Desktop gwaro kamera inoratidzira yakazara yakazara mabhatani ekudzora pane base base kamera.Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuwana pasina kukanganisa mharidzo yako.
Imwe yeQD3900H2 Desktop Document kamera chikuru chimiro kugona kwayo kushanda isina komputa.Inoratidzira zvese zviri zviviri VGA uye HDMI zvinobuda, inogona kubuda yakananga kune purojekita kana kuratidza
Qomo dual LED sidelamps inodzivirira chero kupenya kana kuratidza.
Bhatani rakapfuma mumaremote rinobatsira iri nyore kudzora kure.Muparutivi interface iyo iwe yaunogona kuisa iyo remote control pasina kurasikirwa
Zvinotevera: Qomo desktop Doc Cam ine A4 saizi yekupfura
Zvakapfuura: QD3900H1 Flated bed Gwaro kamera
Desktop gwaro kamera
Hd Document Kamera
QD3900H2 desktop gwaro kamera
QD3900H2 data yehunyanzvi